Amagama Amagama aseNgesi: Igama lokugqibela iZiselo kunye neMvelaphi
Iimpawu zamagama zesiNgesi - iZiselo kunye neMvelaphi
Yintoni Ethetha Ngayo Igama Lakho LesiNgesi?
Amagama angamaNgesi njengoko sibaziyo namhlanje - amagama omndeni adluliselwe kakuhle esuka kubaba ukuya kwindodana ukuya kumzukulu - awazange asetyenziswe ngokubanzi ukususela emva kokunqoba kukaNorman ka-1066. Ngaphambi kwelo xesha kwakungekho abantu abaneleyo ukwenza kuyimfuneko ukusebenzisa enye into ngaphandle kwegama elinye. Njengoko inani labantu belizwe likhula, ke, abantu baqala ukukhawuleza kwiingcaciso ezinjenge- "John Baker" okanye "uTomas, unyana kaRichard" ukuba bahlule phakathi kwamadoda (kunye nabasetyhini) negama elinye.
Amagama achaza ekugqibeleni ahlanganiswa nentsapho, ifa, okanye idlulile, ukusuka kwisizukulwana esinye kuya kwesinye. Oku kwakuyimvelaphi yamagama amaninzi ethu.
Ngoxa beza kusetyenziswa kwinkulungwane yeshumi elinanye, amaqhina azalwayo awazange aqheleke eNgilani ngaphambi kwexesha le-16 leNguqulelo yeNkulungwane. Kucatshulwa ukuba ukufakwa kwee-parishi zokubhalisa ngo-1538 kwakuyimpembelelo enkulu kulo, njengoko umntu wangena phantsi kwesibongo esinye xa ebhaptizwa kwakungenakuza kutshata phantsi kwelinye igama, aze angcwatyelwe phantsi kwesithathu. Kweminye imimandla yaseNgilani yaza kamva ekusebenziseni amagama , kodwa ke. Kwakungekho kude kube ngasekupheleni kwekhulu leshumi elinesixhenxe leentsapho iintsapho ezininzi eYorkshire naseHalfax zathatha amagama.
Amagama amaninzi eNgilani ngokubanzi aphuhliswe kwimithombo emine emikhulu:
I-Patronymic & Matronymic Surnames
La magama aphuma kwiibhaptizo okanye amagama angamaKristu ukubonisa ulwalamano lwentsapho okanye udidi oluthile oluvela kwigama linikwe igama lika- matronymic , intsingiselo evela kwigama lomama.
Abanye abhaptizwayo okanye banikezwa ngamagama baye baba ngamagama amagama ngaphandle kweenguqu kwifom (unyana uthatha igama likayise ngokuthi igama lakhe). Abanye bongezelela isiphelo esinjenge --s (eziqhelekileyo eMzantsi naseNtshonalanga yeNgilandi) okanye -son (okhethwe kwisiqingatha esenyakatho sase-Ngilani) egameni likayise. Ixesha elide-elixhasayo libuye lidibaniswe ngegama lomama.
Amagama angamaNgesi agqiba ekungeneni (ukusuka eBrithani, "ukuvelisa," kwaye -ininzi ibonisa igama lomntu okanye igama lentsapho ngokunjalo.
Umzekelo: UWilson (unyana ka-Will), uRogers (unyana kaRoger), uBenson (unyana kaBen), uMadison (unyana / intombi kaMadi), uMarriott (unyana / intombi kaMariya), uHilliard (unyana / intombi kaHildegard).
Amagama amaninzi aseNgesi aphuhliswe kumsebenzi womntu, urhweba okanye isikhundla kwindawo. Iimpawu eziqhelekileyo ezi-3 zesiNgesi- uSmith , Wright noTylor- izibonelo ezilungileyo kakhulu ezi. Igama eliphela -mntu okanye -aqhelekileyo lithetha igama elinjalo loshishino, njengeChapman (umgcini wesitolo), iBarker (ityunner) kunye noMgcini-fayile. Ngesinye isihlandlo igama elingaqhelekanga elisebenzayo linganika inkcazelo kwimvelaphi yentsapho. Ngokomzekelo, i-Dymond (abadobi) baqhelekile ukusuka kwi-Devon, kunye ne-Arkwright (umenzi wee-arks okanye iibhokhwe) ngokuqhelekileyo esuka eLancashire.
Ngokusekelwe kumgangatho oyingqayizivele okanye uphawu lomzimba lomntu, amaqonga achaza ngokuphindaphindiweyo avezwa ngamagama omnxeba okanye amagama eefama. Uninzi lubhekisela kumbono womntu - ubukhulu, umbala, ubuciko, okanye isimo senyama (i- Little , White , i-Armstrong). Ifayili echazayo ingabhekisela kumntu ngamnye okanye iimpawu zakhe zokuziphatha, ezifana noGochichild, Puttock (okhanga) okanye oBulumko.
Iimpawu zendawo okanye iiSurname zendawo
Lawa ngamagama aphuma kwindawo yokuhlala apho umphathi wokuqala kunye nentsapho yakhe behlala khona, kwaye ngokuqhelekileyo imvelaphi eqhelekileyo yegama lesiNgesi. Baqala ukuqala eNgilani ngabantu baseNorman, abaninzi babo ababebizwa ngokuba negama labo. Ngaloo ndlela, amagama amaninzi aseNgesi afumana kwigama langempela, i-county, okanye indawo apho umntu ahlala khona, asebenza okanye aphantsi komhlaba. Amagama omntla eBrithani enkulu, njengeCheshire, Kent kunye neDeon baye bavunywa njengamaqongo. Iklasi ye sibini yamagama aqingqiweyo aphuma kwiidolophu nakwiidolophu, ezifana neHertford, uCarlisle ne-Oxford. Amanye amagama asekuhlaleni avela kwiimpawu ezichazwayo ezifana neenduli, iinkuni, kunye nemifudlana echaza indawo yokuhlala yomthengisi.
Le mvelaphi yegama elinamagama afana ne- Hill , Bush , Ford , Sykes (umlambo wamanzi) kunye ne-Atwood (kufuphi nomthi). Amagama amagama aqala ngeqhosha lase- At- ngokukodwa libizwa ngokuba ligama kunye nomvelaphi wendawo. Ngamanye amaxesha kwakusetyenziswa njengesiqalo samagama angingqi.
I-TOP 100 IMIS ENGLISH SURNAMES NAMANINGA AKHO
2. IJONES 52. KELLY
3. I- WILLIAMS 53. I- COOK
4. TAYLOR 54. IKHADI
5. I- BROWN 55. RICHARDSON
6. AMASEBENZI 56. I- BAILEY
7. EVANS 57. I- COLLINS
9. UTOMAS 59. SHAW
10. UJOHNSON 60. MURPHY
11. IINKROBE 61. IMALI
12. UROBINSON 62. i- COX
13. THOMPSON 63. IIRICHARDS
15. HLAWULA 65. MARSHALL
16. I- WHITE 66. no- ANDERSON
17. AMADWADI 67. SIMPSON
18. I- HUGHES 68. ELLIS
19. I- GREEN 69. ADAMS
21. LEWIS 71. BEQELA
23. QALISA 73. I-FOSTER
24. IPATEL 74. CHAPMAN
25. UJACKSON 75. POWELL
26. WOOD 76. IWEBB
27. TURNER 77. IINKONZO
28. MARTIN 78. UKUQALA
29. UMQHUBA 79. I-MASON
31. IKHADI 81. HUNT
32. UMORRIS 82. HUSSAIN
33. NGAPHAMBILI 83. CAMPBELL
34. QALISA 84. IMATHEWS
36. INKOSI 86. IPALMER
37. BAKER 87. AMALHUMA
38. HARRISON 88. IIMALI
39. UMORGAN 89. IBARNES
40. ALLEN 90. KUNYE
41. UJAMES 91. ULLOYD
42. I- SCOTT 92. UBUTLER
43. PHILLIPS 93. URUSSELL
44. AMANZI 94. UBARKER
45. DAVIS 95. I- FISHER
46. ​​I- PARKER 96. UKUQALA
47. IPRICE 97. IJENKINS
48. BENNETT 98. I-MURRAY
49. UNTSHA 99. DIXON
50. I-GRIFFITH 100. HARVEY
Umthombo: I- ONS - Amagama aphezulu aphezulu ama-500 abhalisiwe ngo-1991-ngoMeyi 2000
Iidroke eziKhanya kakhulu zeSikhabhodi
Yiyiphi Imoto Entsha Iyaphuka? (Ngaba Kubi?)
Indlela yokucoca iinqwelo zemoto ezingcolileyo zokubuyisela okanye ukugcina
20 Iimpawu Zothando Zobubele Ezikwenza Uhambe 'Yeka Ehle!'
Imfazwe Yomlomo: USS Saipan (CVL-48)